FBC - Godina Shawaa Bahaatti oomishni %75 sassaabameera
Godina Shawaa Bahaatti oomishni %75 sassaabameera
Finfinnee, Sadaasa 5, 2010 (FBC) Godina Shawaa Bahaattii roobni yeroo isaa hin-eegne midhaan qaqqabanirra miidhaa akka hin-geessisneef duula ba’ameen oomshni maasii qonna gannaa irratti misoome %75 sassaabamuusaa Waajjirri Qonnaa fi Misooma Uumamaa Godinichaa beeksise.
Waajjirichatti Qindeessaan Damee Qonnaa Obbo Aschaalaw Zannabaa har’a akka ibsanitti akka raaga Ejansii Meetiroolojii Biyyaalessaa irraa argameen qonnaan bultoonni godinichaa midhaan rooba yeroo isaa hin-eegganne irraa eeguuf hojii oomisha sassaabuu hojjataa jiru.
Dhuma Fulbaanaa jalqabee hanga ammaatti meeshaalee qonnaa hammayyaa fi humna namaan deggaramuun sochii geggeffameen lafa waktii gannaa kana misoome kuma 400 fi kuma 38 fi 356 keessaa midhaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 28 fi 767 irratti argamu haamamee kuufameera.
Hojii oomisha sassaabuu kanaarratti dubartoota 26, 830 dabalatee qonnaan-bultoonni kuma 100 fi kuma 63 ‘kilaastaraan’ qindaa’anii irratti hirmaachaa akka jiran himaniiru.
Wayita sassaabbii oomishaa kana keessumaa, qisaasinni akka hin-mudanne qaamoleen raawwachiiftonni sadarkaa sadarkaan jiran godinicha keessaa kana dura leenjiin kennameef qonnaan bulaaf hordoffii fi deggarsa taasisaa akka jiran himaniiru.
Raaga oomishaa godinichaan lafa misoome waliigalaa irraa oomishni kuntaalli miliyoonni 15.8 ni-argama jedhamee akka eegamu beeksisaniiru.
Qonnaan-bultoota godinichatti argaman keessaa %74 kan ta’an fayyadamaa ‘paakeejii Eksteenshinii’ Qonnaa ta’uu isaanii kan himan qindeessaan kun, barana oomishtummaa heektaaratti kuntaala 36 ga’uf galmi qabamee hojjatamuusaa kaasaniiru.
Oduuwwan Biroo « Hanqina ‘simmintoon’ ijaarsi manneen-jireenyaa waliinii 20/80 dhaabbateera: ‘kontiraaktarotaa’ fi gorsitoota	Manni marichaa qoqqobbii Eertiraarra kaa’e dheeresse »